प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसरी काममा भाँजो हालियो त? हेर्नुहोस आजको प्रेस ब्रिफ्रिङ जस्ताको त्यस्तै – Samacharpati Samacharpati प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसरी काममा भाँजो हालियो त? हेर्नुहोस आजको प्रेस ब्रिफ्रिङ जस्ताको त्यस्तै – Samacharpati
मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आजबाट १ हजार ९३ दिन अर्थात् ३ बर्ष पूरा
भएको छ । आज हामी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र नयाँ निर्वाचनको मिति
तोकिएको विशेष परिस्थितिमा प्रेस ब्रिफिब गर्दैछौँ । त्यसैले वर्तमान सरकारले यस
अवधिमा गरेका कामको सब्क्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्नुअघि प्रतिनिधिसभा विघटन किन
गर्नुप¥यो भन्ने चर्चा गर्न आवश्यक ठान्दछु ।
शुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्याराहरु त थिए नै । बिभिन्न ढंगले काममा
ब्यवधान खडा गरिएकै थियो । खासगरी पछिल्लो एक वर्षदेखिझण्डै दुईतिहाई
सांसदको समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धनसरकारले जस्तो नियति
बेहोर्नु प¥यो । एकातिर जनताको उच्च आकाब्क्षा सम्बोधन गर्नु पर्ने, अर्कोतिर आफ्नै
खुट्टामा अल्झिएर अलमलिए झैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।
झण्डै ३ बर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीबिहीन थिए। नियुक्ति, प्रक्रियामै
जान पाउँदैन, अवरोध हुन्छ । संसदलाई ।।।बिजनेस’ सरकारले दिने हो । २०७४
फागुनदेखि यता संसदमा पेश भएका कयौं विधेययक ।।।हाउस’मा छलफलमा लगिन्नन्
। बल्लतल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरु अनावश्यक छलफलकै
गोलचक्करमा फसिरहके ा छन्, फसाइन्छ ।सरकारले निर्णयकालागि सदनमा पेश गरेका
प्रस्तावहरु समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्नन् । राजदूत खाली छन्, नियुक्त गर्न दिइन्न
।संबैधानिक अब्गमा केही गरी कसैको सिफारिस भइहाले कचिब्गल मच्चाइन्छ र
आप्mनै दलका सदस्यले संसदीय सुनवाई समितिमा नियुक्ति अड्काउँछन् । यहाँसम्म
कि, “सनसेट ल” को रुपमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको
।।।शीघ्र निर्माण’का लागि मस्यौदा गरिएको ।।।विकास सम्बन्धी विधेयक’ र ।।।सार्वजनिक
खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने बिधेयक’लाई समेत अलमल्याई सार्बजनिक सेवा प्रबाहमा
अबरोध पु¥याई बिकासको गति नै अवरूद्ध गरिन्छ । सरकारी निकायका कतिपय
कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने वा नियुक्ति नै हुन नदिनेगरी एक किसिमले
भन्ने हो भने समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरियो । सकेसम्म अल्मल्याउने,
अल्मल्याउन नसके निहुँ खोजरे कामैगर्न नदिनेतहमा आप्mनै दलका साथीहरु उत्रनु
यद्यपि,नेकपाको शीर्ष तहमा रहके ा केही नेताहरुको अतृप्त आकाब्क्षा र कुण्ठाको
बाछिटा ब्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा म हरदम सतर्क रहेकै हुँ । विगत वर्षदिन
देखि ।।।समयभन्दा अगावै’ निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौँ लाञ्छना
सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको पनि हुँ । गठबन्धन
सरकारको अर्को कुनै समुहले झैँ, आप्mनै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बिरुद्ध
अचानक फौजदारी अभियोग वितरण गरी पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गर्ने र
सके विस्थापन गर्ने बाटोमा हिडँन तम्सिरहेका नेताहरुलाई सम्झाउने र स्थितिलाई
परिवर्तन गर्ने प्रयत्न मैले गत पुस ५ गते दिउसो २ बजेसम्म नै जारी राखेँ (प्रेस ब्रिफ्रिङ जस्ताको त्यस्तै साभार गरियो )